DOWNLOAD ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP LASERJET 1010 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Usoro Ọkwọ ụgbọala maka HP Laserjet 1010 Printer
Ime ụlọ n'ime ụlọ bụ ihe dị mkpa. N'oge a, ọ gaghị esiri ike ịmepụta ọbụna maka ndị na-amalite na mpaghara a. Ngwaọrụ pụrụ iche maka ngwaọrụ gam akporo ga-enyere gị aka ọ bụghị naanị ime ụlọ, kamakwa iji gbakọọ ọnụ ala nke ndozi.
N'iburu eziokwu ahụ anya na na nkwụsị nke ọtụtụ ngwọta, e nwere ụdị ihe dị iche iche dị iche iche, maka gị ọrụ a ga-abụ ọ bụghị naanị dị mfe, kamakwa ọ na-adọrọ mmasị. Ngwa ndị dị na isiokwu ahụ ga-enyere gị aka ịghọta nrọ gị niile gbasara iwu ụlọ na imepụta ya.
Ihe omume ahụ ga-aba uru, dịka ọ na-enye ohere maka nyocha maka nrụzi na iwu. A na-arụ ọrụ nke ịgbakọ mpaghara ime ụlọ iji kọọ akụkọ banyere ọnụ ọgụgụ nke ihe dị iche iche ụlọ.
Ọ dị mkpa ịsị na enwere ohere ịgbakọ ọnụ ọgụgụ akwụkwọ mpịakọta dị mkpa maka obere ọnụ ụlọ. N'otu ụzọ ahụ, gụnyere ihe osise, ọnụọgụ nke laminate ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ kpebisiri ike.
Tụkwasị na nke ahụ, software ahụ na - enye gị ohere inyocha ego gị, ịchịkwa ha. Ndị mmepe agbakwunyere ọrụ nke na-echekwa akụkọ gị niile na faịlụ dị iche. A na-echekwa ya na ebe nchekwa nke smartphone ma ọ bụ mbadamba, na izipu ozi site na e-mail na onye ọrụ agaghị abụ nsogbu.
Download Prorab Site na Google Play
Imepụta imepụta ihe maka IKEA
Ihe ngwọta nwere ike ịmepụta ụlọ gị. Ekele maka ndị na-ese foto atọ, ị nwere ike ịlele nhazi ụlọ ahụ. Ọbá akwụkwọ ahụ nwere ihe karịrị 1000 dị iche iche, tinyere arịa ụlọ na ihe ịchọ mma. A pụkwara imegharia ihe niile dị n'ime ime. Ihe okike nke ihe ọ bụla na-eme ma n'ime na n'èzí ụlọ ahụ, na nbudata ihuenyo ọ bụla ga-eme na HD mma.
Akụkụ nke ihe eji achọ mma na-emelite mgbe niile. Na mgbakwunye na ịmepụta nhazi nhọrọ pụrụ iche, enwere nhọrọ dị njikere maka iji ha mee ihe. E nwere nkwado maka iji akụkụ ndị na-abụghị akụkụ maka ụlọ, nke nwere ike gbagọrọ agbagwoju, gbakwunyere, wdg.
Download mmepụta imepụta maka IKEA site na Google Play
Ngwudata ngwa ngwa nke Android na ejiji nke eji eme ya nke ga-abughi ihe ndabere maka imeputa onwe gi. A ka na-eji nhọrọ imepụta ihe ugbu a ka ị ghara ịmalite ọrụ site na ọkọ. N'oge mmepe ahụ, anya elu na 3D ga-adị. Enwere nkwado maka ime atụmatụ ụlọ ụlọ ndị dị n'ala.
Ọbá akwụkwọ ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe dị iche iche dị n'ime ngwa ahụ, nke nha na agba na-agbanwe. Ya mere, ọ gaghị abụ nsogbu ịhazi ndozi, imeghari ma ọ bụ gbanwee ime. Ndị mmepe ahụ gbakwunyere ọrụ nke ijegharị site na ebe a haziri. Mgbe ị na-arụ ọrụ na njikwa eserese nwere bọtịnụ Wepụ / Redo, ya mere onye ọrụ ahụ nwere ike iwepụ ọrụ ikpeazụ.
Download Nhazi 5D si Google Play
Ngwa a nwere echiche dị iche iche dị iche iche maka ime ime ụlọ gị. Ụlọ agha ahụ na-agụnye modulu na ọnụ ọgụgụ dị oke ọnụ, ya bụ, canisters, appliances, sofas corner and cabinets. Onye ọrụ nwere ike ịgbanwe agba nke cabinets, facade na ihe ndị ọzọ na uche.
E gosipụtara ụdị stovu, oven na sinks. Tinyere ihe ndị ọzọ, ị nwere ike ịmepụta ọnọdụ nke ngwa ngwa kichin, na nghọta gị.
Site na ngwanrọ a, ịmepụta kichin na-eme ka ọ dịkwuo mfe, nyere nchịkọta na ihe ndị agbakwunyere.
Download Kwadebe Kuki na Google Play
Sichapụ si na nkwupụta ihe eji emepụta nhazi. Site na ngwanrọ a maka gam akporo, ị nwere ike ịhọrọ ngwá ụlọ kwesịrị ekwesị maka ụlọ gị.
E nwere ihe odide 3D nke a na-atụle ọnọdụ nke ihe dị iche iche n'ime ụlọ. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọrụ nke ijikọta eziokwu dị elu, ya mere, iji nyochaa ọnọdụ n'ọnọdụ a ga-apụ "ndụ".
Site na ịpị otu, ị nwere ike ịzụta ihe ịchọrọ. A na-ejigharị ihe eji emepụta ihe na arịa ndị dị na ya na ihe ọhụrụ. E nwere ntan nke na-enye gị ohere ịkwakọba ngwá ụlọ.
Download Roomle site na Google Play
Ụlọ ahịa Houzz na-enye ndị ahịa ngwa ngwa ha nke na-enye gị ohere ịhọrọ ụdị ụlọ. Tupu onye ọrụ mepee ọbá akwụkwọ nke ihe eji achọ ihe maka ịhazi ụlọ ahụ. E nwere ndebiri ndị na-enyere aka na mmalite nke mgbidi na ihe mma nke ụlọ ahụ. Na gallery e nwere ọtụtụ foto dị egwu nke kachasị mma na HD-àgwà. N'etiti ha: modernism, nke oge a, obodo, mba, Scandinavian na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ị nwere ike ịmepụta ụdị maka ụlọ ahụ dum - a na - enye Houzz ọtụtụ ihe dị iche iche maka ụlọ ọ bụla. Akụrụngwa na-enye ọrụ n'ụdị ịzụ ihe, na-enyekwa gị ohere iji ọrụ ndị nkwekọrịta na ndị ọkachamara ndị ọzọ.
Download Houzz si Google Play
N'ihi mmemme ndị dị otú ahụ, nhazi nke ogige n'ọtụtụ ọnọdụ na-adọrọ mmasị. Ngwaọrụ a dị mfe na-enye gị ohere imepụta echiche gị na ama ma ọ bụ mbadamba na-enweghị ihe ọmụma ọ bụla. N'ọtụtụ ọnọdụ, ngwa ndị dị otú ahụ ga-enyere aka na nhazi na nghazi nke ụlọ, ụfọdụ na-ekpebikwa ego akwụ ụgwọ maka ịzụta ihe ụfọdụ.